ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု (DAM) ပလပ်ဖောင်းဆိုတာဘာလဲ။ | Martech Zone
ဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု (DAM) တွင် စားသုံးမှု၊ မှတ်စာ၊ ကက်တလောက်တင်မှု၊ သိုလှောင်မှု၊ ပြန်လည်ရယူမှုနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ဖြန့်ဖြူးခြင်းဝန်းကျင်ရှိ စီမံခန့်ခွဲမှုတာဝန်များနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များ ပါဝင်သည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဓာတ်ပုံများ၊ အန်နီမေးရှင်းများ၊ ဗီဒီယိုများနှင့် တေးဂီတများသည် ပစ်မှတ်ဧရိယာများကို စံနမူနာပြပါသည်။ မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု (DAM အမျိုးအစားခွဲ) ။
ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု DAM သည် မီဒီယာဖိုင်များကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ စုစည်းခြင်းနှင့် ဖြန့်ဝေခြင်းဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့်ဖြစ်သည်။ DAM ဆော့ဖ်ဝဲလ်သည် ဓာတ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုများ၊ ဂရပ်ဖစ်များ၊ PDF များ၊ နမူနာများနှင့် အခြားဒစ်ဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာများ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဒစ်ဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာများကို ဖန်တီးရန် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များကို တီထွင်နိုင်စေပါသည်။
ဒီကိစ္စကိုလုပ်ဖို့ခက်ပါတယ် ဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု မဆုတ်မနစ်သိသာဖော်ပြရန်ပေါ်ထွန်းခြင်းမရှိဘဲ။ ဥပမာ - ယနေ့စျေးကွက်သည်ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာအပေါ်များစွာမူတည်သည်။ အချိန်ဆိုတာပိုက်ဆံပဲ။ ထို့ကြောင့်စျေးကွက်သမားများသည်သူတို့၏ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာအချိန်များကိုပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းသော၊ အမြတ်အစွန်းရသောအလုပ်များနှင့်မလိုအပ်သောနေရာများနှင့်မလိုအပ်သောအိမ်မှုကိစ္စများအတွက်အနည်းဆုံးအချိန်ဖြုန်းသင့်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအရာများကိုအလိုလိုသိသည်။ ဒါကြောင့်အံ့ it's စရာကောင်းတာကကျွန်ုပ်သည် DAM အကြောင်းပြောပြဖို့ပါ ၀ င်ခဲ့တဲ့အချိန်တိုအတွင်းမှာအဖွဲ့အစည်းများရဲ့ DAM နှင့်ပတ်သက်ပြီးအသိပညာများတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရသည်မှာအံ့သြစရာဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာမကြာသေးမီအချိန်အထိထိုအဖွဲ့အစည်းများသည်၎င်းတို့ပျောက်ဆုံးနေသည်ကိုမသိခဲ့ကြပါ။
နောက်ဆုံးတွင်၊ ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများစွာ (“စီမံခန့်ခွဲနိုင်သောပမာဏ”) အများအပြားရှိသည်ကို သိရှိသောအခါတွင် ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် DAM ဆော့ဖ်ဝဲအတွက် စျေးဝယ်ထွက်လေ့ရှိပြီး ဒုတိယအချက်မှာ ၎င်း၏ကြီးမားလှသော ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းစာကြည့်တိုက်နှင့် ဆက်ဆံရာတွင် အလွန်အချိန်ယူရသည်။ လုံလောက်တဲ့ အကျိုးမပေးဘဲ အချိန်အများကြီးပေးတယ်။ အဆင့်မြင့်ပညာ၊ ကြော်ငြာ၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၊ ဖျော်ဖြေရေး၊ အကျိုးအမြတ်မယူသော၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာများ အပါအဝင် လုပ်ငန်းအများအပြားတွင် ဤသည်မှာ မှန်ပါသည်။
ဒီနေရာမှာ DAM ၀ င်ရောက်လာတယ်။ DAM စနစ်တွေဟာပုံစံမျိုးစုံနဲ့အရွယ်အစားတွေအများကြီးရှိတယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့အားလုံးဟာအနည်းဆုံးအရာတွေလုပ်ဖို့တည်ဆောက်ထားတယ်။ ဗဟိုပစ္စည်းတွေကိုစုဆောင်း၊ စုစည်း၊ ဖြန့်ဝေတယ်။ သင်၏ရောင်းချသူရှာဖွေမှုကိုလမ်းညွှန်ရန်သင်ဘာသိဖို့လိုသနည်း။
မကြာသေးမီက ချဲ့ထွင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါဂုဏ်ထူးရှင်းပြကောင်းတစ် ဦး အဖြူရောင်စက္ကူထုတ်ပြန်ခဲ့သည် SaaS နှင့် Hosted vs. Hybrid နှင့် Open Source DAM ဖြေရှင်းချက်များအကြား (နှင့် ထပ်နေသည်)။ ဤသည်မှာ သင်၏ DAM ရွေးချယ်မှုများကို စတင်စူးစမ်းလိုခြင်း ရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးရန် အရင်းအမြစ်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
အရေးကြီးဆုံးကတော့သိထားသင့်တာကဒီဝေါဟာရသုံးခုစလုံးကို DAM (သို့မဟုတ်ဒီကိစ္စအတွက်မည်သည့်ဆော့ (ဖ်) ဝဲ) ကိုမတူညီတဲ့စံနှုန်းအရသတ်မှတ်ပေးတဲ့နည်းလမ်းပါ။ SaaS နှင့်တပ်ဆင်ထားသည့်ဖြေရှင်းနည်းများအကြားထပ်တူကျမှုများမရှိသလောက်ပင်။
SaaS ဆည် အနည်းဆုံးအိုင်တီကုန်ကျစရိတ်နှင့်အတူလုပ်ငန်းအသွားအလာနှင့်သုံးစွဲနိုင်၏စည်းကမ်းချက်များ၌ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကိုဆက်ကပ်။ ဆော့ဖ်ဝဲနှင့်သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကို cloud တွင်တည်ရှိသည် (ဆိုလိုသည်မှာဝေးလံသောဆာဗာများ) ။ ဂုဏ်သိက္ခာရှိသော DAM ရောင်းချသူသည်အလွန်လုံခြုံသော hosting method ကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းအချို့သောအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်၎င်းတို့အားအဆောက်အအုံပြင်ပရှိအထိခိုက်မခံသောသတင်းအချက်အလက်များကိုခွင့်မပြုပါ။ ဥပမာသင်သည်အစိုးရထောက်လှမ်းရေးအေဂျင်စီတစ်ခုဖြစ်ပါက SaaS DAM ကိုသင် လုပ်၍ မရပါ။
ထည့်သွင်းထားသောပရိုဂရမ်များသည်အခြားတစ်ဖက်တွင်“ အိမ်တွင်း” ဖြစ်သည်။ သင်၏အဖွဲ့အစည်း၏လုပ်ဆောင်မှုသည်သင့်အဆောက်အ ဦး အတွင်းရှိဒေတာများနှင့်ဆာဗာများကိုသိမ်းဆည်းခြင်းမှသာရရှိနိုင်သောမီဒီယာကိုထိန်းချုပ်ရန်လိုအပ်နိုင်သည်။ သို့ဖြစ်လျှင်ပင်သင့်အချက်အလက်များကိုဝေးလံသောဆာဗာများပေါ်တွင်အရန်သင့်သိမ်းဆည်းထားခြင်းမရှိပါကဤအလေ့အကျင့်ကြောင့်အချို့သောအဖြစ်အပျက်များကသင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုလုံးဝပြန်လည်သိမ်းဆည်း။ မရတော့ဘဲအန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်ဟုသင်သတိပြုသင့်သည်။ ဒါကဒေတာအကျင့်ပျက်ခြစားမှုဖြစ်နိုင်ပေမယ့်လည်းခိုးမှု, သဘာဝဘေးအန္တရာယ်သို့မဟုတ်မတော်တဆမှုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးတော့ open source ရှိတယ်။ ဝေါဟာရသည် software ၏ code သို့မဟုတ်ဗိသုကာကိုရည်ညွှန်းသည်။ သို့သော်ဆော့ဖ်ဝဲကိုအဝေးမှသို့မဟုတ်သင်ကိုယ်တိုင်စက်အတွင်း၌ ၀ င်ရောက်ခြင်းရှိမရှိကိုရည်ညွှန်းသည်။ သင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်သည်အဖြေတစ်ခုတည်ခင်းခြင်း (သို့) ထည့်သွင်းခြင်းရှိမရှိသင့်အရင်းအမြစ်မှန်မမှန်သင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းထောင်ချောက်ထဲမကျသင့်ပါ။ ဆော့ဝဲလ်သည် open-source ဖြစ်ခြင်းသည်သင်သို့မဟုတ်အခြားသူတစ် ဦး သည်ပရိုဂရမ်၏ပျော့ပျောင်းမှုအပေါ်အမြတ်ထုတ်ရန်အရင်းအမြစ်များရှိမှသာတန်ဖိုးကိုထပ်တိုးသည်ကိုသတိပြုသင့်သည်။
ပေးပို့မှု မော်ဒယ်များတွင် အမျိုးမျိုးသော အမျိုးအစားများ မလုံလောက်ပါက အပြင်တွင် ကျယ်ပြန့်သော အင်္ဂါရပ်များ ရှိနေပါသည်။ အချို့သော DAM ရောင်းချသူများသည် ၎င်းတို့၏စနစ်တွင် သင့်အားရောင်းချရန်မကြိုးစားမီ သင်၏ထူးခြားသောလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်အတွက် အခြားသူများထက် သာလွန်ကောင်းမွန်သည်၊ ထို့ကြောင့် လိုအပ်ချက်များစာရင်းကို တတ်နိုင်သမျှအသေးစိတ်စာရင်းဖြင့် သင်၏ DAM လိုက်လံရှာဖွေရန် အရေးကြီးပါသည်။
DAM နည်းပညာများတွင် အဓိကတိုးတက်မှုများထဲမှတစ်ခုမှာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အတည်ပြုချက်ပေးသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အတူ အများအားဖြင့် အဓိကတည်းဖြတ်ခြင်းနှင့် ထုတ်ဝေခြင်းပလပ်ဖောင်းများနှင့် ပေါင်းစပ်နိုင်မှုဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သင့်ဒီဇိုင်နာသည် ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း၊ အဖွဲ့ထံမှ အကြံပြုချက်ရယူခြင်း၊ တည်းဖြတ်မှုများ ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် သင့်အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်သို့ တိုက်ရိုက် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ထားသော ပုံအား တွန်းပို့နိုင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။
ပိုကောင်းသည်- သင့်လိုအပ်ချက်များကို မရှိမဖြစ်နှင့် ဆောင်ထားသင့်သော အမျိုးအစားများအဖြစ် ခွဲခြမ်းလိုက်ပါ။ သင့်စျေးကွက် သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းကို အုပ်ချုပ်သည့် စည်းမျဉ်းများ၊ ဥပဒေများ သို့မဟုတ် အခြားသော စည်းမျဉ်းများကြောင့် လိုအပ်သည့် အင်္ဂါရပ်များကို မှတ်သားထားသင့်သည်။
ဤအရာအားလုံးကို လုပ်ဆောင်ရခြင်းမှာ သင်၏အလုပ်အသွားအလာများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အတတ်နိုင်ဆုံး မြှင့်တင်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသည့် အင်္ဂါရပ်အနည်းငယ်နှင့် သင်ဘယ်တော့မှ မလိုအပ်တော့သည့် ခေါင်းလောင်းသံများနှင့် ဝီစီများကို ပေးဆောင်ရသည့် ဝန်ဆောင်မှုများစွာကို သင်ကိုယ်တိုင်ခံစားရကြောင်း သေချာစေပါသည်။ သို့မဟုတ် အသုံးပြုလိုသည်။
အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုစဉ်းစားခြင်း ဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် အရ ကုန်ကျစရိတ်ဖြတ်တောက်ခြင်း or အချိန်ချွေတာခြင်း မလုံလောက်ပါဘူး။ DAM သည် သင့်အဖွဲ့အစည်းနှင့် အရင်းအမြစ်များကို မည်ကဲ့သို့ အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ကို ၎င်းသည် အာရုံမခံစားနိုင်ပါ။
အဲဒီအစား၊ DAM အကြောင်း စဉ်းစားပါ။ ပြန်လာခဲ့မယ်. DAM ဆော့ဖ်ဝဲသည် တစ်ဦးချင်းစီ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းကို လွယ်ကူချောမွေ့စေသည့်နည်းလမ်းကို ရည်ညွှန်းရန် စကားလုံးကို အသုံးပြုလေ့ရှိသော်လည်း (မှန်မှန်ကန်ကန်သုံးသည့်အခါ) ၎င်းသည် လုပ်အား၊ ဒေါ်လာနှင့် အရည်အချင်းများအပေါ် တူညီသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။
ဒီဇိုင်နာယူပါ။ လောလောဆယ်တွင် သူ သို့မဟုတ် သူမသည် မလိုအပ်သော ပိုင်ဆိုင်မှုရှာဖွေမှုများ၊ ဗားရှင်းထိန်းချုပ်မှုတာဝန်များနှင့် ရုပ်ပုံစာကြည့်တိုက် အခန်းသန့်ရှင်းရေးအတွက် နာရီ 10 တိုင်းတွင် 40 ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ DAM စနစ်ထည့်သွင်းခြင်းနှင့် သင့်ဒီဇိုင်နာ၏နာရီများကို ဖြတ်သင့်သည်ဟု မဆိုလိုဘဲ အရာအားလုံးအတွက် လိုအပ်ချက်များကို ဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ အကျိုးမရှိသော၊ အကျိုးမရှိသော လုပ်အားနာရီများကို ယခုအခါ ဒီဇိုင်နာတစ်ဦး၏ အထင်ကြီးလောက်သော ခွန်အားကို ကျင့်သုံးရန် အသုံးချနိုင်သည်- ဒီဇိုင်း။ မင်းရဲ့ အရောင်းဝန်ထမ်း၊ မားကတ်တင်းအဖွဲ့ စသဖြင့် အလားတူပါပဲ။
DAM ၏ဂုဏ်အသရေသည်၎င်းသည်သင်၏နည်းဗျူဟာကိုပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ်သင်၏အလုပ်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေခြင်းမျှသာမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်သင်၏တူညီသောနည်းဗျူဟာကိုပိုမိုတက်ကြွစွာလိုက်စားရန်သင့်အားလွတ်မြောက်စေပြီးသင်၏အလုပ်ကိုအချိန်ပိုရရန်ပိုမိုအာရုံစိုက်စေသည်။
Widen သည် သင့်အား လမ်းလျှောက်ပေးမည့် ဤအတွင်းကျကျ ဂရပ်ဖစ်ကို ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုပလပ်ဖောင်းတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် စီးပွားရေးကိစ္စ.
Tags: ပိုင်ဆိုင်မှုဖန်တီးမှုပိုင်ဆိုင်မှုဖြန့်ဖြူးပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲခြင်းပိုင်ဆိုင်မှု optimizationပိုင်ဆိုင်မှုအစီအစဥ်ပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းသိမ်းခြင်း။ဆည်၏အကျိုးကျေးဇူးများအကြောင်းအရာစျေးကွက်ရေကာတာဆည် infographicဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုပလပ်ဖောင်းအီးမေးလ်စျေးကွက်infographicမီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုဆည်ဆိုတာဘာလဲဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုပလပ်ဖောင်းဆိုတာဘာလဲချဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုချဲ့ထွင်ပါ။
သင်၏ Klaviyo Email Template တွင် သင့် Shopify ဘလော့ခ်ဖိဒ်ကို ထုတ်ဝေနည်း